Nigranee | » आँखा चिलाउँछ ? यो हो समाधानको उपाय आँखा चिलाउँछ ? यो हो समाधानको उपाय – Nigranee
आँखा चिलाउँछ ? यो हो समाधानको उपाय
वायु प्रदुषणका कारण मानिसलाई आँखा सम्बन्धी समस्या देखा पर्ने गरेका छन् ।ग्रामिण क्षेत्रमाभन्दा शहरी क्षेत्रमा आँखा सम्बन्धी रोगका विरामीको संख्या बढ्दो छ । वायु प्रदूषणका कारण मानिसलाई आँखा बिझाउने, चिलाउने, पोल्ने समस्याले सताउने गर्छ ।
आँखा मानिसहरुको संवेदनशील अंग भएको हुँदा कुनै पनि रोग लाग्न दिनुहुँदैन । हामीले जहिले पनि बाहिरबाट आएपछि आँखालाई चिसो पानीले धुनुपर्छ । आँखा चिलाउने समस्याबाट बच्ने केही उपायहरु यस्ता छन्–
– चिसो दूधको प्रयोग गरेर पनि आँखा चिलाउने समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ । कपासलाई चिसो दूधमा केही समय भिजाएर त्यसलाई बेला बेलामा आँखाको वरिपरि राख्नाले पनि आँखा चिलाउने समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ ।
–आँखा बेसरी चिलाएमा तुरुन्तै चिसो पानीको फोहराले आँखालाई पखालेर पनि यो समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ । त्यसको लागि पानीको फोर्स भने धेरै हुनु हुँदैन ।